Maalinta: Febraayo 3, 2018
Khadka Soodhexe ee Uludag
Uludağ, oo ah xarun muhiim u ah xilliga qaboobaha iyo dalxiiska dabeecadda, ayaa weli muujinaya dabaylo xoog leh. Lodos waa la hakiyey sababihii keenay jimcihii, maanta lama qaban karo. Kun rakaab ah 500 saacaddiiba gudaha qolka 176 [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa oo la qorsheeyay in la qabto Febraayo 3 - 4 'Uludag Festival Festival' Jiilaal ', ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira diidmada cimilada darteed. Bandhigga waxaa la qaban doonaa Febraayo 10-11, haddii xaaladaha cimiladu oggolaadaan. Turkiga [More ...]
Kayseri diyaar u ah soo saarista baabuurta
Gudoomiyaha Aaga Bilaashka Kayseri ahna Duqa Magaalada Melikgazi Memduh Büyükkılıç, xubno ka tirsan guddiga agaasimayaasha iyo ganacsatada ayaa ka soo qeyb galay kulanka AK Party Kayseri ku xigeenka Mudane Ismacil Tamer iyo [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay si joogto ah u qabataa nadiifinta taraamka maalin kasta si ay muwaadiniintu ugu safraan iyagoo maskaxda ku haya. 33 tram oo la kulma adeegga gaadiidka dadweynaha ee dadka Eskişehir, 22.00 iyo 06.00 saac walba fiidkii [More ...]
1,2 Milyan Dollar oo Lacagta Lacagta Lagu Sameeyo ee Eurasia Tunnel
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in iyada oo loo yaqaan Eurasian Tunnel, 1 bilyan 200 milyan oo kayd ah la gaarey sanadkii hore oo uu yiri, "Sida sine qua aan aheyn. [More ...]
Nidaamka Gaadiidka Dadweynaha ee Casriga ah ee Ciidanka Baahan
Mid ka mid ah mashruucyada isbeddelka iyo is-beddelka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu waxaa loo adeegsaday xaflad kale. Kumaan kun oo muwaadiniin ah ayaa ka soo qeyb galay xafladda komishanka ee lagu qabtay Fagaaraha Cumhuriyet iyadoo halku dhiggiisu yahay hal-ku-dhigga Isbadalka Casriga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Ordu muz. Qiyaastii 340 [More ...]
15 Bus laga soo galo magaalada Istanbul ee magaalada Sarajevo
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevl Istanbult Uysal wuxuu xafiiskiisa ku martigaliyay Salko Bukvarevic, Wasiirka Dagaalkii Veterans ee Walaahi Isboortiga Bosnia iyo Herzegovina xafiiskiisa. Wasiirka Dagaalyahannada Salko Bukvarevic, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul [More ...]
Maanta taariikhda: 3 Febraayo 1941 Train to Aydın Germencik
3 Febraayo 1941 taariikhda Taariikh 12 ayaa ku dhintay shil tareen XNUMX oo ku dhow Germencik